China IZIGANEKO okungangenwa 12V Lunch igqunyiwe Isikhongozelo Hot Ukutya, iingxoxo ezitshisayo zebanga pizza Bag abenzi nabathengisi | zhao Hongsheng
Izingxobo ukudla shushu
ubhaka ukudla kwezidingo
iingxowa pizza evuthayo
14 "bag pizza
pizza bag unikezelo packbag
18 "bag pizza
24 "bag pizza
zigqunyiwe ubhaka ukudla kwezidingo
bag tote ukudla zigqunyiwe
Izingxobo ukudla thermal
ubhaka ukudla thermal
bag intambo ukudla thermal
bag tote ukudla thermal
Pizza bag elana thermal
ezenziwe ukugcina ukutya eshushu pizza ukufudumala ...
Large gumbi multi yokugquma thermal pizza foo ...
Zokwazisa enkulu kubanda siko ukudla thermal ...
ukutya ashushu nabandayo unikezelo zigqunyiwe izithuthi ezithwala ...
LINE okungangenwa 12V igqunyiwe Lunch yokubeka Hot Ukutya, iingxoxo ezitshisayo zebanga pizza Bag
bag pizza shushu
Red / Blue / Green / Mnyama / Pink
Yamkela Logo esingabizi
Thwala / iingxowa kwamagxa
Nokuba nge plate zokufudumeza:
ubungakanani package Single:
ubunzima Single ezimbi:
5PCS / baseKapa okanye 10PCS / baseKapa
Bags Shenzhen Zhaohongsheng zokuvala Factory yasekwa ngo-2009 Thina ukugxininisa imveliso weengxowa ukhuseleko lokutya yokugquma, ibhegi pizza, ibhegi sasemini, ibhegi kupholile, ibhegi ukudla kwaye sinandipha igama ekhethiweyo kolu shishino.
Iimveliso zethu ukusebenzisa impahla High-grade manzi, neyeeperile umqhaphu, anti-bacteria aluminiyam camera ngefoyile, interlayer Ungasebenzisa EPE, imfunxa, isilika umqhaphu kunye nezinye izinto ngokuvisisana imfuno yoMthengi. Iimveliso zethu lithunyelwa ngayo kumazwe aphesheya.
material : Oxford 1680d Bifilar Ukurhwexa
ukusetyenziswa : unikezelo Ukutya
S upporting lwamandla: 20 ~ 25KG
Thermal okanye kupholile Ixesha: 3~ 4hours
Uhlobo: Tote Bag/Shoulder bag
♦ Ubukhulu womlinganiselo manual, apho kuya kubakho-1 ukuya ku-3 kuphambuka cm
Accessories ziquka: Ubushushu imbasa + imoto yokutshaja umgca + xi cooker + plug
1. Thermal effect ukuya iiyure ezine
2. High-grade izinto manzi kwenza unikezelo bag okuhlala
3. Ezahlukahlukeneyo imibala kunye nezimbo zingenziwa a ccording ngokwemfuneko loMthengi
4.Reinforced lokuthunga PP yilena ehlalayo
5.Pockets macala omabini nga ukubamba iphepha iitawuli, amacephe okanye iziselo
6. icala umnqwazi ngamanzi kunye Velcro kuthintela amanzi angangeni ebhegini
7.The window ecacileyo bag abeke iinkcukacha ukuze loMthengi, logo imveliso okanye iflaya
8.There na ibhodi umngxuma 6MM zixhasa ngeenxa emazantsi ukwenza ingxowa okuhlala
♦ ISAZISO : Emva kokuba igunya ivuliwe, kwipleyiti zokufudumeza kumo ngokuzenzekelayo xa ubushushu engxoweni iwela ° malunga-60 ukuya kuma-65 °; xa amaqondo obushushu ifikelela 80 °, oko sikwimo oluzinzileyo; xa amaqondo obushushu ifikelela 85 ° ku-90 °, kwipleyiti zokufudumeza ngokuzenzekelayo amandla off. Ukuqinisekisa ukusetyenziswa ekhuselekileyo.
ulwenziwo nokuprintwa L ogo s zifuna amaxesha amade imveliso kunye neentlawulo ezongezelelweyo kufuneka ukuba ziprinte L ogo s.
♦ ubungakanani Ubushushu ipleyiti ungenziwa ngemfuneko
ombane ♦ Input: 100 ~ 240V
♦ Car ezibiza output umgca yangoku: 12V 4A
Okokuqala ukudibanisa i iadaptha amandla, ndibuvelela intambo kunye nepleyiti eshushu, ngoko babeke kwipleyiti eshushu ncwaba emazantsi wengxowa, uze uvule amandla.
♣ I-bag usenakho ukubamba iiyure ezi-3 ukuya 4 ngaphandle amandla
iimveliso zethu ezenziwe ngezinto eziphakamileyo kwibanga, kwaye luyasetyenzwa athungwe ziinkqubo ezininzi. Ezi mveliso ixesha elide kakhulu yaye ezintle
Ngokuqhelekileyo, sisebenzisa indlela ibhokisi ukuphakheja ukunikezela impahla ngokusebenzisa iindlela ngeendlela logistics nokubonisa. Ukuba yinto yanikwa kwee-odolo, siza kusebenzisa izikhongozeli isikhongozeli ukuthunyelwa. Ukuba abathengi babe iimfuno ezikhethekileyo ezingxobeni kwiinqanawa, nceda uqhagamshelane nathi nge email.
Ixesha Sample: Ngokuqhelekileyo phakathi 7-10days kuyilo 1-3different; ngokuba ngaphezu 3designs, kufuneka zixhomekeke speifications kanye kunye requirments.
Delivery Ixesha: Ngokuqhelekileyo phakathi 40days emva kokuba yonke into confirmed.Actually base ngeenkcukacha kunye requirments kunye nobungakanani, kuya kuqinisekiswa specificly xa asayine umyalelo ukuthenga.
A isifo Umyalelo & Product
Singayamkela izixa ezincinane (ngaphantsi kwe 100) lwemiyalelo kwaye kwakhona ukwamkela oda ekulu. A Inani elincinane odolo sikwazi uzilungiselele ngaphakathi ngeveki kwaye amalungiselelo pfumeleni, umthamo omncinane odolo zingathunyelwa ukuvakalisa; inani elikhulu odolo iya kuthatha iintsuku ezingama-30 ukuya kuma-40 ukulungiselela imveliso amalungiselelo ngolwandle, ukuba kukho inani elikhulu imiyalelo sidla ukusebenzisa izikhongozeli ukuthunyelwa nge isitya.
Besisoloko ukusebenza nzima endleleni eya uphuhliso lwemveliso ezintsha. Ukuba unayo imveliso entsha ofuna okanye ziyilelwe omtsha omnye wena, sinako ukukunceda ukuba wenze kuyilo yakho ibe imveliso ogqityiweyo ngokweemfuno zakho.
A: Ewe! Singabantu manufactory ibekwe Shenzhen , China.
A: Thina ukugxininisa imveliso weengxowa yokugquma thermal, iingxowa pizza zigqunyiwe, ukutya okunkonkxiweyo iingxowa kupholile, sasemini zigqunyiwe iingxowa kunye nezinye iintlobo zokhuseleko lokutya iingxowa ngci.
A: Ngokuqinisekileyo. Uninzi iimveliso zethu OEM. Kungaba silkscreen eziprintiweyo, transfer ubushushu eziprintiweyo, babebhala, njalo-njalo ziya kunika logo yakho PDF okanye ifayile AI kulungile.
A: Nceda ushiye umyalezo wakho ngezantsi - imeyili kule umthengisi , efana nobukhulu, yangaphakathi, ilogo, njl Siya ukuphendula ngexesha emva ukufumana imibuzo yakho.
A: Ngokuqinisekileyo. We nikeza isampuli ( ngaphandle logo ) ukuya you.You kufuneka ahlawule ixabiso isampula nabemithwalo prepaid. Ukuba uyala iziqwenga 100 ngendlela enye, siza kunika inkonzo isampuli simahla.
A: Oku kusekelwe ubunzima, yempahla kunye ilizwe lakho.
A: Kuthatha iintsuku 2-3 ukuze kwenza isampula. Nokuveliswa kufuneka iintsuku 20-25.
A: Yonke indlela yentlawulo ilandelayo kwenziwa Alibaba Trade Assurance.
T / Yinyaniso: Kuba umthengi entsha, 30% T / T kwangaphambili xa umyalelo iqinisekisiwe, 70% eseleyo emva umgangatho aprroved kodwa phambi deliveried; For old customer,30%T/T in advance when an order confirmed,70% balance before we released the B/L COPY.
L / C: 30% T / T kwangaphambili, 70% L / C kwi emehlweni B / L IKOPI. 100% L / C kufuneka thethwana ngokukhethekileyo.
D / P: Ngokuba abathengi ubudala kuphela.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane nathi nge email.
Ishicilelwe yi Eano
Previous: LINE 1680D igqunyiwe Ukutya pizza Thwala Lunch Bag Thermal
Next: siko kuprintwa Izingxobo ubhaka sopakisho ukutya manzi ukuze ibhokisi sasemini
LINE High Grade okungangenwa Best Hot Ukutya Pizza ...
LINE okungangenwa Nethemba Thermal Pizza sasemini Cool ...
Ezinkulu, iingxoxo ezitshisayo zebanga igqunyiwe Thermal Ukutya Delivery Lu ...
IZIGANEKO Bike 12V iingxoxo ezitshisayo zebanga Ukutya Ukwambathisa Thermal Pi ...
LINE okungangenwa Delivery 12V Pizza Food, iingxoxo ezitshisayo zebanga ...
Popular kwizinga eliphezulu Bike Takeaway Insulat Thermal ...
Lwedilesi: No 35, kwisithili isitalato henggang longgang